16 Responses to “ချစ်သူရဲ့ နှင်းဆီလက်ဆောင်”
အဲလောက်ကြီး ချစ်တာမျိုး ကို လေးစားတယ်ဗျာ
It is very nice to read this post. It gives mealot of emotional feeling. I got to understand how important the love is.
Hopefully all the pairs follow this way!!!
Happy Valentine's Day,, Ama.
Very Good Tal ........ Heartfelt ......
ချောေ၇၇၇၇၇၇၇..................ဒီပို.စ်လေးကို ကြိုက်တယ်နော်................အဲလိုချစ်တဲ.သူမျိုး၇ှိနိုင်ပါတယ်.....သေပြီးသားလူနဲ.တောင် လက်ထပ်တာ ဖတ်လိုက်၇တယ်........အဲလို အချစ်မျိုးတွေ ချစ်သူတွေကြားမှာ ထာ၀၇ ၇ှင်သန်နိုင်ပါစေလို...............<img src="http://cdn.content.sweetim.com/sim/cpie/emoticons/000204EA.gif" border="0" title="Click to get more." >
ချစ်ခြင်းမေတ္တာဆိုတာ ဘယ်တော့မှ အိုမင်းခြင်း၊ သေဆုံးခြင်းမရှိတဲ့အရာပါနော်။
" ချစ်သူများနေ့ " မှာ ချောတစ်ယောက်ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ပါစေနော်။
မောင်လေးတောင် အဲလိုအကြံပေါ်မိတယ် -----
ချစ်တက်တေးဖူးဂျ တားတားကငယ်တေးလည် :P
တယောက်က တယောက်ကို သာယာကြည်နူးအောင် စွမ်းဆောင်ပေးတာဟာ
နုညံ့လှပတဲ့ ဆွတ်ပျံ့ဖွယ်ရာ ရသလေးပါပဲ။ အမှတ်မထင်ရရှိတဲ့ လက်ဆောင်တိုင်းက တန်ဖိုးကြီးပါတယ်။ တယောက်ထဲ ကျန်ခဲ့သူအတွက် စိတ်မကောင်းဖြစ်မှုကိုပါ ခံစားလိုက် ရတယ်။
ဒီ ပို့စ်လေးဖတ်ပြီ.. အဲ့လို အချစ်ကြီးတဲ့သူတွေကို..အရမ်းလေးစားမိပါတယ်
ချစ်သူများနေ့ အမှတ်တရ ပို့စ်လေးလာဖတ်သွားပါတယ် ညီမလေးရေ။
ချစ်တတ်ကြတဲ့သူတွေကို အမြဲလေးစား အားကျလျှက်ပါပဲ။
အားကျလိုက်တာ နော် ...
ကိုယ့်မှာ တော့ အထီးကျန်နေခဲ့တယ် ..အဟီးဟီး ...၀မ်းနည်းလိုက်....
အမ ရဲ့ ဘ၀လဲ ဒီပိုစ့်လေး လို ပဲ ဖြစ်ပါစေကွယ်....
I hope It"s justadream,Notareal that may I expected.
အားကျစရာကောင်းတဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာပဲနော်...။ အပြင်မှာမတွေ့ဖူးသေးဘူးမချော...